Naya Post Nepal | पल प्रकरण : पीडितको पक्षबाट नौ जनाले गरे बहस, पलको पक्षमा को को छन् ?
पल प्रकरण : पीडितको पक्षबाट नौ जनाले गरे बहस, पलको पक्षमा को को छन् ?
काठमाडौं – नाबालिगमाथि ज ब रजस्ती क र णी गरेको अभियोगमा पल शाहविरु”द्ध परेको मु”द्दामा जाहेरवालाको पक्षबाट नौ जनाले बहस गरेका छन् । बुधबारदेखि तनहुँ जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश हरिषचन्द्र ढुंगानाको इजालसमा सुरु भएको थुनछेक बहसमा जोहरवालाको पक्षमा दुई सरकारी वकिलसहित नौ जनाले ब’हस गरेका हुन् ।
२०७८ चैत्र ९, बुधबार प्रकाशित 1 Minute 324 Views